‘बिग आइकन’ बेलायत प्रस्थान | Jukson
पोखरा, ५ असोज ।
सातौं बिग आइकन सुवास गुरुङ सांगीतिक कार्यक्रमका लागि बेलायत प्रस्थान गरेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको पत्रिका ‘यूरोपको नेपालीपत्र’ को निम्तो तथा काठमाण्डौ थापाथलीस्थित ब्रिटिश कलेजको व्यवस्थापनमा उनी बेलायत गएका हुन् ।
उनीसँगै बिग एफएमका अध्यक्ष महेश भण्डारी पनि विहीबार राति बेलायततर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । त्यहाँ करिब दुई हप्तासम्म सुवासले विभिन्न शहरहरुमा रहेका नेपाली समुदायबीच आफ्नो साँगीतिक प्रस्तुती राख्ने कार्यक्रम छ । साउथ हारो, प्लमस्टीड लगायतका स्थानमा कार्यक्रम निश्चित भइसकेको छ ।
यसअघि, चौथो बिग आइकन मुस्कान रानाभाट, छैटौं बिग आइकन साजन आले यो ‘ट्रिप’ अन्तर्गत बेलायत पुगेर सांगीतिक कार्यक्रम गरिसकेका छन् । द ब्रिटिश कलेजसँग बिग आइकन गायन रियालिटी शो को सहकार्य भएपछि यो चाँजोपाँचो मिलेको हो । लण्डनस्थित साउथ हारोमा रहेको माया पबमा दुई वटा कार्यक्रम र लण्डनकै प्लमस्टीडमा रहेको डाँफेमा उनको प्रस्तुति रहनेछ । जसको प्रचारप्रसार माया पव र डाँफेले गरिरहेको छ ।
यो बसार्इंको सम्पूर्ण बन्दोबस्त यूकेस्थित ‘नेपालीपत्र’ले नै गर्नेछ । ‘नेपालीपत्र’ यूकेबाट निस्कने नेपाली भाषाको पत्रिका हो । यो पत्रिका भगिनि संस्था द ब्रिटिश कलेजको मातहतमा रहेर निस्कँदै आएको छ । काठमाण्डौको थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिश कलेज’ले नेपालमै बेलायतकै यूनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिँदै आएको छ । लगातार चार वर्षदेखि द ब्रिटिश कलेजले बिग आइकनसँग सहकार्य गरेको छ ।
युरोपको नेपालीपत्र लि. का म्यानेजिङ डिरेक्टर राजन कँडेलले बिग आइकन गुरुङको सांगीतिक भ्रमणलाई उपलब्धीमूलक र स्मरणयोग्य बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । साँगीतिक गायन प्रतिभाहरुलाई जन्माउदै निरन्तर सात बर्षसम्म आईपुगेको बिग आइकनको सँस्करण अझै धेरै अगाडिसम्म बढोस् भन्ने कामना समेत गरे ।
यूके प्रस्थान गर्नु अघि बिग आइकन सुवास निकै उत्साहित देखिए । ‘लण्डनमा विशेष कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति राख्ने कुरा भएको छ ।’ गुरुङले भने–‘एकदमै एक्साइटेड छु । र, आफुलाई निकै भाग्यशाली ठानेको छु । ’ बिग आइकन भएकै कारण आफुले यूके जस्तो मुलुकमा साँगीतिक प्रस्तुती राख्न पाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘यो मेरो लागि निकै ठूलो अवसर हो । बिग आइकन गर्ने बिग एफएम र मलाई निम्तो दिने संस्था द ब्रिटिश कलेज तथा नेपालीपत्रप्रति म कृतज्ञ छु ।’ गुरुङले भने ।
बिग एफएमका अध्यक्ष महेश भण्डारीले यो साँगीतिक यात्राले बिग आइकनको अन्तराष्ट्रिय प्रभाव देखाउने बताए । ‘बिग आइकनका प्रतिभाहरुले अन्य मञ्चहरुमा गरेको प्रदर्शन र उनीहरुले प्राप्त गरेको स्थानले नै प्रष्ट पार्छ बिग आइकन कस्तो प्लेटफर्म हो ? भन्ने कुरा ।’ भण्डारीले भने– ‘हामीले प्रतिभाहरु जन्माउँदैनौ मात्रै, बरु उनीहरुलाई अझै फराकिलो बनाउँदै लैजान्छौँ ।’ बिग आइकनका लागि यस्तो खाले अवसर दिएकोमा द ब्रिटिश कलेज र नेपालीपत्रलाई धन्यवाद समेत दिए ।
'छक्का पञ्जा ३'को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
गन्धर्ब नाटकघरमा ‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कुल व्वाई’
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा एमालेकै अग्रता
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरु
तपाई हाम्रो एक मतले देशलाई कुन दिशा तर्फ लैजाने भनि निणर्य गर्न सक्छौ “ऐतिहासिक निर्वाचन भएकाले सबै जनता सहभागी हुर्नु पर्छ ” ः दीपक आचार्य
पोर्चुगलले इरानसँग बराबरी खेल्यो, स्पेन र पोर्चुगल अन्तिम १६ मा